မယွန်းနိစ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(မယောနိ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
မယွန်းနိစ် (အင်္ဂလိပ်: Mayonnaise) သည် အေးအေးပျစ်ပျစ် အနှစ်ရည်တမျိုးဖြစ်ပြီး အသားညှပ်ပေါင်မုန့်များ (ဆင်းဒွစ်၊ ဟမ္ဘာဂါ)၊ အသုပ်စုံနှင့် အာလူးချောင်းကြော်တို့၌ တွဲဘက်စားသုံးကြသည်။ အတိုကောက် မေယိုး (mayo) ခေါ်၏။  သနပ်နှစ် ( tartar sauce)၊ အချဉ်ရည်နှစ် (fry sauce)၊ ရောမူလဒယ် (rémoulade)၊ ဆယ်လဆာဂေါ့ (salsa golf)၊ ရူရိရီ (rouille) တို့တွင် အခံအနှစ်ရည်အဖြစ်လည်း သုံး၏။ 
မယွန်းနိစ်ကို ဆီ၊ ကြက်ဥအကာနှင့် အချဉ်ဓာတ်အတွက် ရှလကာရည် သို့မဟုတ် ရှောက်ရည်တို့ကို မွှေ၍ရသော ခလောက်ရည်တမျိုး ဖြစ်သည်။  အရသာအတွက် အခြားပါဝင်ပစ္စည်းတို့ကိုထည့်ကာ မျိုးကွဲများစွာ ရှိလာ၏။ အရောင်မှာလည်း ဖြူတူတူမှသည် ဝါတာတာအထိ ရှိတတ်သည်။ အနှစ်မှာလည်း ကရင်ပျော့ပျော့မှသည် ဂျယ်လီစေးစေး အနေအထားအထိ ရှိ၏။
ကြက်ဥရှောင်သော သားသတ်လွတ်သမားများအတွက်နှင့် ဥနှင့်မတည့်သူတို့အတွက် ကြက်ဥနှစ်မပါသော မယွန်းနိစ်ကို၎င်း၊ ထိန်းစားနေသူတို့အတွက် ဆီမပါသော ကိုလက်စထရောနည်း မယွန်းနိစ်ကို၎င်း၊ ဈေးကွက်တွင် ရနိုင်ပေသည်။ 
↑ "Mayo - Definition and More from the Free Merriam-Webster Dictionary". Merriam-webster.com.
↑ Holly Herrick, The French Cook: Sauces, 2013, ISBN 1423632397
↑ McGee, Harold (2004). On Food and Cooking : The Science and Lore of the Kitchen (2nd ed.). New York: Scribner. p. 633. ISBN 978-0684800011. Mayonnaise is an emulsion of oil droplets suspended inabase composed of egg yolk, lemon juice or vinegar, which provides both flavor and stabilizing particles and carbohydrates.
↑ Moran, Victoria; Moran, Adair (2012). Main Street Vegan: Everything You Need to Know to Eat Healthfully and Live Compassionately in the Real World. Penguin. p. 168. ISBN 9781101580622.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မယွန်းနိစ်&oldid=709858" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။